Thwebula Tumblr 3.8.4.2 isizulu – Vessoft
Tumblr – a software for a ukuphathwa okuqukethwe popular service microblogging. Isofthiwe kwenza ukuba ukubhalisela blogs zabanye abasebenzisi, ukushicilela izihloko ezehlukene namavidiyo, exchange of imiyalezo, hlolisisa izikhala kanye enze nezinye izici zokuxhumana. Tumblr iqukethe search engine elula futhi unikeza lakhetsiwe izihloko ezihlukahlukene Blogger best in the world. Isofthiwe uhlukanisa indaba ishicilelwe izigaba ezifana chat, video, izithombe, izingcaphuno, links kanye nemibhalo. Tumblr futhi ikuvumela ukuba wabelane blogs kanye nezinye izinto nabasebenzisi of zokuxhumana nomphakathi.
Publications kokuqukethwe ohlukahlukene
Okwenzayo blogs multiple
Ukwehlukanisa of materials by imikhakha ehlukahlukene
The esikahle search engine
Usekela nemisebenzi yokuxhumana
Amazwana on Tumblr:
Tumblr Ahlobene software:
English, Afrikaans, Français, Español... Kate Mobile 20
Inethiwekhi Yokuxhumana Ijubane eliphezulu futhi okunye Amatebhe iklayenti olusemthethweni VK yokuxhumana. Isofthiwe iqukethe amathuluzi anhlobonhlobo ukuqinisekisa ukuhlala ukhululekile inethiwekhi.
English, Українська, Deutsch, Русский... Instagram 9.7
English, Українська, Français, Español... LinkedIn 4.0.89
English, Українська, Français, Español... Wikipedia 2.0
Zokuham video Isofthiwe ukubuka ukusakazwa video ngezindaba ezahlukene ezivela emhlabeni wonke. Isofthiwe kwenza ukuthola imifudlana ividiyo ngezilimi akhethwe umsebenzisi.
Office Isofthiwe ukusebenza nge amafayela ehhovisi uhlobo. Isicelo ine wonke amathuluzi adingekayo ukuze adale bese uhlela amaphepha.